Blog - SHARRTZ.ORG
For your Reality World
Myoe Pya ထဲက 3D တွေဟာ အပြင်လောကနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ထပ်တူကျနိုင်သလဲ?
~~ 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 နဲ့ 𝟗𝟗% တူတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ~~
တော်တော်များများ မေးကြတဲ့မေးခွန်းပါ။ အဖြေကိုတော့ Founder မှသက်သေနဲ့တကွ Video ပြုလု်ပေးထားပါတယ်။
Author Sharr Thet ZawPosted on July 2, 2022 July 2, 2022 Categories Application, Knowledge, Knowledge and Training, MyoePya, Software, Technology and SocialLeaveacomment on Myoe Pya ထဲက 3D တွေဟာ အပြင်လောကနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ထပ်တူကျနိုင်သလဲ?
Myoe Pya Launching Event
MyoePya Platform launch event will be held on June 1 2022 , in Rangoon, Hlaing Township, at Lotte Hotel Yangon on Pyay Road. MyoePya was created by SHARRTZ.ORG and agreed to join AYEYARWADDY Engineering Group in 2022.
Mrs. May June Kyaw Win, Managing Director of AYEYARWADDY Engineering Group gave an opening speech at the ceremony.
Ms. Sharr Thet Zaw, Founder of SHARRTZ.ORG explained the details of MyoePYA platform.
Co-Founder Mr. Soe San Aung interviewed about MyoePya Platform.
ထိုနည်းပညာများထဲတွင် Virtual Reality နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသော Myoe Pya Platform သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
Myoe Pya Platform အား SHARRT.ORG (http://sharrt.org/)မှ 2019 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ဆောက်ကာ 2021တွင်စတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
Myoe Pya Platform ဟာ BIM( Building Information Modeling) နည်းပညာအပေါ်အခြေခံထာပြီး
မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးနည်းပညာရှင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော Virtual Reality Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Myoe Pya Platform ကို SHARRTZ.ORG (http://sharrtz.org/) နှင့် AEG ( Ayayarwadaddy Engineering Group )တိုပူးပေါင်းကာ 2022 ဇွန်လ 1ရက်နေ့တွင် အများပြည်သူများအားစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Myoe Pya Platform ကို Developer Version နှင့် End User Version ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။
Developer Version ကိုရောင်းချ /ဌားရမ်းလိုသူများ၊ ပွဲစီစဉ်သူများ ၊ Agency များသုံးစွဲရန်အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
End User Version ကိုကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူလိုသူများ ၊ အိမ်နှင့်တိုက်ခန်းဝယ်လိုသူ/ဌားရမ်းလိုသူများနှင့်နည်းပညာလေ့လာလိုသူများအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
Myoe Pya Platform က Developer များနှင့် End User များ၏လိုအပ်ချက်များကိုတနေရာထဲတွင်အချိန်ကုန်ငွေကုန်အလွန်သက်စွာဖြင့်လိုအပ်သောအချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း၊အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းတိုကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Wholesales and Retail ၊ Event ၊ Wedding Planner and Wedding Decorator ၊ Home Decorators ၊ Construction ၊ Real Estate ၊ Show Room and Display ၊ Hotel and Tourism ၊ Festival နှင့် ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို Myoe Pya Platform ပေါ်တွင် 3D AR နည်းပညာအားအသုံးပြုပြီး ရောင်း/ဝယ်/ဌားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတစ်နေရာထဲ၌လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
Myoe Pya Platform အား Website Version နှင့်သုံးနိင်သလို Mobile Version အနေဖြင့်လဲ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Myoe Pya Mobile Application အား App store နှင့် Play Store များတွင်မည်သူမဆိုအခဲ့မဲ့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Developer များအ‌နေဖြင့်
Myoe Pya Platform ပေါ်တွင်အ‌‌ကောင့်များ ဖွင့်လိုပါကအာက်ပါဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများအားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက email သိုမဟုတ် Phone ဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Sales Office : Room 804, Building 19, MICT Park, Hlaing University Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Author Sharr Thet ZawPosted on June 4, 2022 June 18, 2022 Categories ActivitiesLeaveacomment on Myoe Pya Launching Event
အိမ်အခန်းကောင်းကောင်းကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အတွက် Open Door Program
အိမ်ခန်း အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ကို ဖုန်းပေါ်ကနေတစ်ဆင့် အပြင်မှာ လက်တွေ့ တစ်ကယ်သွားကြည့်သလို ခံစားရအောင် video နဲ့ရော 3D Vision နဲ့ပါ ဖော်ပြပေးတဲ့ Open Door Programကို Sharrtz မှ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
Open Door Program ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားမှ လှပပြီး နေချင့်စဖွယ်
အဆောက်အဦးပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပေးထားတဲ့ Program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Open Door Program ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ အဆောက်အဦးတွေကို Review Video သီးသန့်ရိုက်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကြည့်ရှူသူတွေကိုယ်တိုင် Open Door က မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ Platform ကနေတဆင့် အဆောက်အဦးရဲ့ 3D နဲ့ အခန်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Open Door အစီအစဥ်တွေကို စိတ်ပါဝင်စားလို ဆက်သွယ်လိုပါက
Hotline 09448018254 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Author Sharr Thet ZawPosted on November 1, 2021 June 4, 2022 Categories ActivitiesLeaveacomment on Open Door Program
Synthetic Training Environment (STE)
တကယ့်အစစ်အမှန်တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ လေ့ကျင်ရေးများက အလွန်ပဲခြားနားလှပါတယ်။ တကယ်တန်းလက်တွေ့ သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင် တည်ငြိမ်မှု ရရှိဖို့ နဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့အတွက်တောင် ခက်ခဲတာမျိုးတွေရှိတာ အမှန်ပါ။
ဒီလိုမျိုး ကိစ္စရပ်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တန်းလျားတွေမှာ 2D ကဒ်ထူပြားတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခြင်းကအပြည့်အဝ ပြင်ဆင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် AR ကတော့ အဲဒီစိတ်ပျက်ဖွယ်အနေအထားကို အထောက့်အပံ့ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Synthetic Training Environment (STE) ,ဖန်တီးထားသောလေ့ကျင့်ရေးပတ်ဝန်းကျင်က စစ်သားတွေကို ပိုမိုထိရောက်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက စစ်တပ်ရဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ စစ်လက်နက်တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ အစီစဥ်ရေးဆွဲခြင်းစစ်ပညာရပ်သင်ကြားခြင်း အပြင် စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်တာ မျိုးတွေကိို အဓိကထားပြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ဖန်တီးထားသောလေ့ကျင့်ရေးပတ်ဝန်းကျင်(STE)ကို လုပ်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့က ပိုပြီး မြင့်မားတဲ့ လက်နက်ဖန်တီးမှုတွေ ခံတပ်အဆောင်အအုံတည်ဆောက်မှု တွေလုပ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့် ခြေမြန်တပ်ရင်းတွေ ၊ ကြီးတပ်နဲ့ ပက်သတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
AR နဲ့ VR ကို စစ်ရေးမှာ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၍ငွေကြေးသက်သာခြင်း၊ စစ်သားတွေအတွက် ပိုပြီးလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းတို့အပြင် စစ်သားတွေအတွက် သိနိုင် မြင်နိုင်စွမ်းတွေကိုလဲ ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
Official Navy Report အရ Video game ကစားတဲ့သူနဲ့ မကစားတဲ့ သူနဲ့ မှာ Game ကစားတဲ့ သူက အချက်အလက်တွေမှတ်ခြင်း ပုံရီပ်တွေမှတ်ထားခြင်း စတဲ့ အပိုင်းတွေမှာ ပိုမိုအားကောင်းပြီး AR VR နဲ့ လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် ရုပ်ပုံတွေက ကွန်ပြူတာ Vision တွေနဲ့ ဖြစ်လို့ Game ကစားတဲ့သူက ပိုမိုကောင်းမွန်တာ လေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် AR VR နဲ အကူအညီနဲ့ စစ်သားတွေရဲ့သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကို သိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးနိင်ပြီး လက်တွေ့လေ့ကျင်မှုများနဲ့ ကွင်းဆင်းလေ့ကျင့်မှုတွေမှာလဲ အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိသာပေါ်လွင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖန်တီးထားသောလေ့ကျင့်ရေးပတ်ဝန်းကျင်(STE) က AR(ဖန်တီးထားသောကွန်ပြူတာ အမြင်)ရယ် လက်တွေ့ ကမ္ဘာရယ် လေ့ကျင့်ရေး နည်းပညာတွေကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်တီးထားသောလေ့ကျင့်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ Platform တစ်ခုတည်းမှာပဲ လေ့ကျင့်ရေးပေါင်းစုံကို ပြုလုပ်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပြီး အထူးအချက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာ မဆို လေ့ကျင့်ရေးနယ်ပယ်လုပ်ဆောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖန်တီးထားသောလေ့ကျင့်ရေးပတ်ဝန်းကျင်(STE)က အနာဂတ် AR နည်းပညာနဲ့ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ရေး ဆင်းရမဲ့ နေရာအားလုံးကို Platform ဖြစ်ခုတည်းမှာ စုပေးထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
Author soesanaungPosted on July 1, 2021 July 1, 2021 Categories AR/VR, Knowledge, Knowledge and Training, Technology and Social, UncategorizedLeaveacomment on Synthetic Training Environment (STE)
AR in Military Training
နိုင်ငံတကာမှာ စစ်ရေးစစ်ရာလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့အတွက် နည်းပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပထမဦးစားပေးနေရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ထိုနည်းပညာတွေထဲမှ AR နည်းပညာက အဓိကအနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။
Snapchat လိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့ AR သုံး app တွေ ပေါ်ထွက်လာမှုတွေက Military ဖက်က AR တိုးတတ်လာမှုတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် မပြောပလောက်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
Militaryနယ်ပယ်မှာ သူတို့ရဲ့ တိုက်လေယာဉ် နှင့် လေယာဉ်မှုးတွေအတွက် Overlay နည်းပညာလို့ခေါ်တဲ့ AR နည်းပညာကို အကောင်အထည်ဖော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်တွေ တိုးတတ်လာတာနဲ့ အညီ စစ်ပွဲတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကလဲ နည်းပညာတိုက်ပွဲတွေ အဖြစ်တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာကြပါပြီ။ ထို့အပြင် Data & Graphic နည်းပညာ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကို စစ်ရေးမှာ ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။
အနာဂါတ်မှာ တကယ့်လက်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေက သေနတ်ပစ် game တွေလိုမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
ကမ္ဘာတစ်လွှာ AR Developerတွေက ယခုလိုမျိုးနည်းပညာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ခေတ်သစ် စစ်ပွဲတွေကို စဉ်နွှဲဖို့ အသင့်အနေအထားဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
Military တွေထဲမှာ AR တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာပုံကို ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ ထိုနည်းပညာကို တိုးပွားစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားချက်(Warfare augmentation)လို့ အနီးစပ်ဆုံးဘာသာပြန်ပေးလို့ရပါတယ်။
တိုးပွားစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားချက်(Warfare augmentation) မှာ နည်းလမ်း (၃) သွယ်ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Tactical Augmented Reality (TAR) ဆိုတဲ့နည်းပညာနဲ့ မိတ်ဆပ်ပေးပါရစေ။
Tactical Augmented Reality (TAR) ကို အလွယ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Military နယ်ပယ်ရဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ AR ကို ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Military နယ်ပယ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ ပြောတဲ့အထဲမှ တိုက်လေယာဉ်တွေ စစ်ဦးထုပ်တွေမှာပါတဲ့မျက်မှန်စသည်တို့ အကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလတ်တွေ Data တွေ ပစ်မှတ်တွေကို လေယာဉ်မှူး (သို့) စစ်သားတွေရဲ့ မျက်စိရှေ့က Layerပေါ်မှာ AR နည်းပညာသုံးပြီးတော့ ပေါင်းစည်းပြီး ကြည့်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလိုမျိုး နည်းပညာမျိုးကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာကတော့ U.S. Army Research, Development and Engineering Command’s Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center (CERDEC) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tactical Augmented Reality (TAR) က အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ညကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ တူပြီး အဲ့ဒီမှန်ပြောင်းကနေတဆင့် ကိုယ့်လူလား ရန်သူလားဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီARမျက်မှန်တွေမှာ GPS systemကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဦးထုပ်တွေမှာ တစ်ခါတည်းတပ်ဆင်ထားပြီးနေ့ရောညပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရလာဒ်အနေနဲ့ကတော့ စစ်သားတစ်ဦးဟာ သူတို့ရဲ့တည်နေရာကို သိလိုတဲ့ အခါတိုင်း Map ကို သီးသန့်သွား ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ AR မျက်မှန်ကနေ တဆင့် သူတို့ရဲ့တည်နေရာကို သိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က အဲဒီမျက်မှန်ကနေပဲ ရန်သူရဲ့တည်နေရာ ပစ်မှတ်အကွာအဝေးတွေကို ချိန်ညှိဖို့အတွက်ပြပေးပါတယ်။
ဒီနည်းပညာမှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် wireless internet ရှိမယ်၊ အဲဒီ အင်တာနက်က ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အထောင့်အပံ့ပေးတဲ့ နည်းပညာလဲ​ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
AR နည်းပညာက စစ်သားတွေအတွက် စစ်မြေပြင် အသိအမြင်ကို ပိုတိုးတတ်စေဖို့ နောက်ပြီးသယ်ဆောင်ရမဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လျော့ချဖို့၊ ရန်သူနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလဲ ထိရောက်စွာခြေမှုန်းနိုင်ဖို့အတွက် တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Author soesanaungPosted on June 16, 2021 June 16, 2021 Categories AR/VR, Knowledge, Knowledge and Training, Technology and Social, UncategorizedLeaveacomment on AR in Military Training
Future of AR VR
ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကြီးမှာ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့် လူသားတွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အရင်ကထက်ပိုမို လွယ်ကူ အဆင်ပြေလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာကို ကူးသန်းဆက်သွယ်ဖို့ရာအတွက်လူအင်အား တိရစ္ဆာန် အင်အားတွေကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း လှုပ်ဆောင်လာကြရာကနေ ယနေ့ခေတ်မှာ ခေတ်မှီစက်ပစ္စည်းတွေ တီထွင်အသုံးပြုပြီး လွယ်လင့်တကူ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်မှီနည်းပညာများကို အသုံးပြုချင်းအားဖြင့် အချိန် နဲ့ ငွေကို သက်သာစေနိင်သလို လူစွမ်းအားကိုလဲ​ချွေတာရာ ရောက်ပါတယ်။
Sharr တို့ အရင်က အိမ်ခန်းဝယ်ဖို့ အိမ်ခန်းငှားဖို့ဆိုရင် ပွဲစားတို့ ၊ Agent တို့နဲ့ အရင်ချိတ်ရမယ်။ သူတို့ပြတဲ့နေရာကို အချိန်တစ်ခုပေးပြီးသွားကြည့်ရမယ်။ အိမ် (၅) လုံးလောက် ကြည့်ဖို့ကို အနည်းဆုံး (၃)ရက်လောက် အချိန်ပေးရတဲ့ အပြင် သွားစရိတ် စားစရိတ် တွေလဲ ကုန်တယ်၊လူလဲပင်ပန်းရပြီး သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ရဖို့ အတော်လေးအားစိုက်ရတာမျိုး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါတောင် ကိုယ့်မြို့တွင်းက နေရာတွေမို့လို့ပါ အဲလိုမဟုတ်ပဲ စီးပွားရေးကိစ္စအတွက် ရေခြားမြေခြားက နေရာတွေကိုသာ စုံစမ်းရမယ်ဆိုရင် ဒီထက်ပိုတဲ့ စားရိတ်တွေ ခွန်အားတွေပိုသုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာဆိုရင် Sharr တို့က နေရာပေါင်းစုံက အိမ်တွေ အဆောင်အဦးတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာပဲ 3D နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ကြည့်နိုင်တော့မှာပါ။
ရုပ်ပုံတွေ နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားကြည့်ရတာမျိုး မဟုတ်ပဲ VR နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ထိုနေရာကို ရောက်နေသလိုမျိုး ကြည့်ရှု့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Website တွေ Map တွေကနေပြီးတော့ အိမ်တွေကို လိုက်ရှာနေစရာမလိုတော့ပဲ AR 3D Map ထဲမှာ အဆောက်အဦးပေါင်းများစွာကို ရှာဖွေလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး တိုက်ခန်း ရောင်းတာ ဝယ်တာမျိုးတင်မကပဲ ခန်းမငှားရမ်းခြင်း ဟိုတယ် အဆောက်အဦးနေရာ စုံစမ်းခြင်းစသည်တို့တွင်လဲ AR VR နည်းပညာများ ချိတ်ဆက်ပါဝင်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများသည် construction, real estate industy အစရှိသောနယ်ပယ်များတွင် နောင်အနာဂတ်အတွက် တိုးတက်လာမည့် နည်းပညာများပင်ဖြစ်ပါသည်။
Author soesanaungPosted on June 5, 2021 June 5, 2021 Categories AR/VR, Knowledge, Software, UncategorizedLeaveacomment on Future of AR VR
AR VR ခြားနားချက်နဲ့ MR
AR ဆိုတာ လက်တွေ့ ကမ္ဘာကိုအသုံးချထားတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပြီး
VR ကတော့ ကွန်ပြူတာကမ္ဘာကို အသုံးချထားတဲ့ နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။
AR ကတော့ လက်တွေ့ကမ္ဘာရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ တည်ရှိမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ ရနေပြီးတော့
VR ကတော့ System ကနေ ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
VR ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Headset device တွေ လိုအပ်ပြီး
AR ကို အသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့ Smart phone တစ်လုံးပဲ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
AR က Virtual world နဲ့ Real world နှစ်ခုစလုံးကို အထူးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့
VR ကတော့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုပဲ အထူးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
MR ကိုတော့ AR နဲ့ VR ပေါင်းစည်းထားတဲ့ နည်းပညာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
MR ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် VR လိုပဲ Headset device လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး
AR မှာမြင်ရသလို Virtual နဲ့ Real world ၂ ခုကို ပေါင်းစပ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
AR VR ခြားနားချက်တွေနဲ့ MR အသုံးပြုပုံတွေကို
Author soesanaungPosted on June 3, 2021 June 3, 2021 Categories AR/VR, Knowledge, Knowledge and Training, UncategorizedLeaveacomment on AR VR ခြားနားချက်နဲ့ MR
AI “Artificial Intelligence” ဆိုတာ Computer စက်ပစ္စည်း အစရှိသည်တို့အတွက် လူတွေရဲ့ အသိဉာဏ်ကို တုပပြီး ထည့်သွင်းထားသော နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
AI ကို နောက်တမျိုး အနေနဲ့ machine learning လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။
Sharr တို့ လူသားတွေဟာ အာရုံ ၅ ပါးကို အာရုံလက်ခံပေးတဲ့ သီးသန့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေက လက်ခံပေးပြီး ဦးနှောက်ကို အကြောင်းအရာ ပို့လွှတ်ကာ တုံ့ပြန်မှု ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
Computer နဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ မှာ အဲဒီ အာရုံတွေကို လက်ခံပေးတဲ့ receivers တွေ (ဥပမာ- camera, sensors, keywords etc)က လက်ခံပြီး အသုံးပြုမှု နယ်ပယ်အလိုက် ရေးဆွဲထားသော programming များကတုံ့ပြန်မှု အဖြေများကို ပြန်လည် ပေးပို့ခြင်း နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
A အတွက် fruit-Apple, Inset-Ant
B အတွက် fruit-Banana, Inset-Bee
အစရှိတဲ့ keywords တွေကို computer မှတ်ဉာဏ်ထဲ ထည့်သွင်းထားမယ် ဆိုပါစို့။
အဲဒီ computer နဲ့ အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ရင်အောက်ပါ အဖြေအတိုင်းရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
We ask Question: A fruit
Computer answer: Apple
We ask Question: B Inset
Computer answer: Bee
Keyword AI နဲ့ ပါတ်သက်လို့ Facebook မှာ “Chinese” နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ keywords ရေးသူများ ကြုံတွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တမျိုးပြောရရင် Face Unlock လိုမျိုး Facebook ရဲ့ face recognizing မျိုးတွေကလည်း AI နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့၏ မျက်နှာ ပုံရိပ်များကို camera မှရယူကာ computer မှတ်ဉာဏ်ထဲ သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Author soesanaungPosted on May 23, 2021 May 23, 2021 Categories Knowledge, Knowledge and Training, UncategorizedLeaveacomment on What is AI?
Mixed Reality ဆိုတာ လက်နဲ့ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လိုရတဲ့ Physical ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ဖန်တီးထားတဲ့ Digital ပစ္စည်းတွေကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ ချိတ်ဆက်လိုရအောင် ပေါင်းစပ်ပေးတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် AR နဲ့ VR ပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့ နည်းပညာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ယခုအခါတွင် Mixed Reality အသုံးပြုထားသော Application Saftware ပေါင်းများစွာ ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်သလို Mixed Reality အသုံးပြု စက်ပစ္စည်းတွေကလဲ လူတွေရဲ့ လက်ထဲကို ရောက်နေကြပါပြီ။
Mixed Reality ကို Design, Education, Entertainment စတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ အသုံးများပြီး Military training, health care တွေနဲ့ remote woking နယ်ပယ်တွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
Mixed Reality ကို အများဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့ Device ကတော့ Microsoft Hololens ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Author Sharr Thet ZawPosted on May 20, 2021 May 20, 2021 Categories AR/VR, Knowledge, Knowledge and Training, Technology and SocialLeaveacomment on What is Mixed Reality?
Virtual reality ဆိုတာ လက်တွေ့ကမ္ဘာနဲ့ဆင်တူပြီ လက်တွေ့ကမ္ဘာမဟုတ်တဲ့ တခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို တင်ဆက်ပြသပေးတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
VR experience ကို အရိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ဥပမာအနေနဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာဖန်တီးထားမဲ့ စိတ်ကူးရင်ကမ္ဘာတစ်ခုရှိမယ်။အဲတာကို Sharr တို့က ကွန်ပြူတာ ကမ္ဘာလို့ခေါ်မယ်။
အဲဲဒီ ကွန်ပြူတာကမ္ဘာကို Sharr တို့မျက်လုံးထဲမှာ အပြည့်မြင်ရဖို့အတွက် VR headset ဒါမှမဟုတ် Mobile Phone ထဲကို မျက်လုံးရှေ့မှာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးတော့ ကြည့်ရှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
VR ကို Entertainment တွေ Video Games တွေမှာ အများဆုံးတွေ့နိုင်ပြီး Education ပိုင်း၊ ဆေးပညာပိုင်း၊ Military Training နဲ့ Business Meeting အစရှိတဲ့ နေရာတွေမှာလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိအနေအထားနဲ့ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ VR experience ကို Moblie ဖုန်းတွေနဲ့ပဲ တွေ့ကြုံကြရတာများပါတယ်။
ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် VR Game တွေ VR Software တွေကို ဆော့နိုင်မယ်၊Video Entertainment အနေနဲ့တော့ youtube မှာ VR Experience တွေကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
VR အတွေ့အကြုံကို VR Box + mobile ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ VR Headset နဲ့ သော်လည်းကောင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
VR Headset တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုတာမျိုးမတွေ့ရသေးပင်မဲ့ တချို့နေရာတွေမှာတော့ VR Headset တွေကို အသုံးပြုပြီး game ဆော့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေကို တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။
VR headset တွေကို ဥပမာပေးရရင် oculus quest, htc vive, htc vive pro အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Mobile နဲ့ VR ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အကူအနေနဲ့ VR Box ကို ကြားခံအနေနဲ့ထည့်သုံးပြီးတော့ ကြည့်ရပါမယ်။
VR Box တွေကို ဥပမာပေးရရင် Google Cardboard, NOON VR, Remax VR အစရှိသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Author soesanaungPosted on May 17, 2021 May 17, 2021 Categories AR/VR, Knowledge, Knowledge and Training, Technology and Social1 Comment on What is Virtual Reality
Student’s Show 2018 - SHARRTZ.ORG on BIM + VR
What is Mixed Reality? – SHARRTZ.ORG on What is Virtual Reality
What is Mixed Reality? – SHARRTZ.ORG on What is AR technology?​
Kyaw Ye Lynn on What is BIM (Part-3)
Technology and Social